Ungayifaka kanjani i-IBAN kuhlelo lokusebenza lwe-IO 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Ngemuva kokuzwa okuningi ngakho, nawe unqume ukubamba iqhaza kwi Ukubuyiselwa kwemali kahulumeni, isinyathelo esikhuthazwa nguHulumeni wase-Italy ukukhuthaza izinkokhelo ngezinhlelo ze-elekthronikhi ezitolo zomzimba ngokukhipha imali ebuyiselwa kuma-euro angama-300 ngonyaka. Ungazange uyazise i-IBAN yakho lapho wenza i-Cashback, uzame ukuyifaka kamuva ngefayela le-Isicelo se-IO: yonke imizamo yakho, noma kunjalo, ayizange inikeze imiphumela oyifunayo futhi manje awusazi ukuthi ulibhekise kuphi ikhanda lakho ukuze uphumelele emzameni wakho.
Uma izinto zinjengoba ngichaze nje, ake ngichaze ungayifaka kanjani i-IBAN kuhlelo lokusebenza lwe-IO. Ezigabeni ezilandelayo zalo mhlahlandlela, empeleni, uzothola inqubo eningiliziwe yokukhombisa i-akhawunti yokuhlola lapho ungathola khona noma yikuphi ukubuyiselwa kwemali okuqoqiwe, kokubili ngesikhathi sokuqalisa kweCashback nangesikhathi esizayo. Ngaphezu kwalokho, kuzoba ngumsebenzi wami ukukunikeza lonke ulwazi oludingekayo ukushintsha i-IBAN yakho futhi, uma kunezinkinga, ngicela usizo eqenjini le-IO.
Uma ngabe yilokho obufuna ukukwazi, ake singaqhubeki futhi sibone ukuthi singaqhubeka kanjani. Ukuphela kokufanele ukwenze ukukhululeka, beka eceleni imizuzu emihlanu yesikhathi samahhala, futhi uzinikele ekufundeni izigaba ezilandelayo. Ngokulandela ngokucophelela imiyalo esengizokunikeza yona futhi ngizama ukuyisebenzisa, ngiyakuqinisekisa ukuthi uzokwazi ukufaka i-IBAN yakho kuhlelo lokusebenza lwe-IO. Ukufunda okujabulisayo nenhlanhla kukho konke!
Ungayifaka kanjani i-IBAN kuhlelo lokusebenza lwe-IO lweCashback
Ungayifaka kanjani i-IBAN kuhlelo lokusebenza lwe-IO ngesikhathi sokubhalisa
Ungayifaka kanjani i-IBAN kuhlelo lokusebenza lwe-IO esikhathini esizayo
Ungayishintsha kanjani i-IBAN kuhlelo lokusebenza lwe-IO
Ngaphambi kokufika enhliziyweni yalesi sifundo futhi usichaze ngokuningiliziwe ungayifaka kanjani i-IBAN kuhlelo lokusebenza lwe-IOAke ngikunikeze imininingwane eyandulelayo ngalokhu.
Okokuqala, kungasiza ukwazi ukuthi uhlelo lwe-IO, olutholakala kumadivayisi we-Android ne-iPhone / iPad, likuvumela ukuthi uhlanganyele nezinsiza ezahlukahlukene zePublic Administration (ngokwesibonelo, ukukhokhwa kwentela yemoto noma ivawusha yeholide) futhi, phezulu wonke umuntu, ukubamba iqhaza kwi Ukubuyiselwa kwemali kahulumeni.
Lesi sakamuva isinyathelo sikahulumeni esivumela zonke izakhamizi ukuthi zithole imbuyiselo eyi-10% efinyelela kuma-euro angama-300 / ngonyaka (ama-euro ayi-150 / semester) ekuthengeni okwenziwe ngamakhadi nezinhlelo ze-elekthronikhi ezitolo zomzimba (ngakho-ke azikho ku-inthanethi), inqobo nje ngoba okungenani kukhokhwa okulandelwayo okungama-50 ngesemester ngayinye. Ngeminye imininingwane, ngiyakumema ukuba ubonane nomhlahlandlela wami wokuthi uHulumeni Obuyisa imali usebenza kanjani.
Ukubamba iqhaza nokuthola noma yikuphi ukubuyiswa okunqwabelene, okokuqala kuyadingeka ukwenza imisebenzi ethile.
Landa uhlelo lokusebenza lwe-IO kudivayisi yakho;
Ngena ngemvume nge- SPID (Public Digital Identity System) noma Nina (Ikhadi Likamazisi Lobuchwepheshe);
Sebenzisa i-State Cashback kusuka esigabeni Isikhwama;
Khulumisana nokwakho I-IBAN;
Faka i- Izindlela zokukhokha (ngokwesibonelo, amakhadi wesikweletu / wedebithi, amakhadi akhokhelwa kusengaphambili, njll.) asetshenziselwa ukwenza ukuthengiselana ezitolo ezibonakalayo.
Ngokuphathelene ne-IBAN, ingangezwa ngesikhathi sokusebenza kweCashback noma ngemuva kwesikhathi, inqobo nje uma kwenziwa ngaphakathi semester yamanje. Ezimweni zombili, umuntu oxhumana ne-IBAN kumele abe ngumnikazi we-akhawunti wamanje. Kodwa-ke, sicela wazi ukuthi ababambiqhaza ababili beCashback bangakudlulisa lokhu ikhodi efanayo ye-IBAN uma bengabanikazi bama-akhawunti ngokuhlanganyela. Futhi, kungasiza ukwazi ukuthi ungangena futhi Ikhodi ye-IBAN ehambisana nekhadi elikhokhelwa kusengaphambili.
Ekugcineni, kufanele wazi ukuthi ezinye izinsizakalo zokukhokha ngogesi (isb. Ngiyacela ed U-Enel X-Pay), ikuvumela ukuthi ubhalisele i-State Cashback ngqo kusuka kuhlelo lwakho lokusebenza (ngakho-ke, ngaphandle kokusebenzisa uhlelo lwe-IO) futhi uthole isikweletu nganoma yikuphi ukubuyiselwa kwemali ku-IBAN okuphathelene ne-akhawunti yakho. Kulokhu, uma isicelo se-IO sisetshenziswa futhi, i-IBAN okukhulunywa ngayo izongezwa ngokuzenzakalela esigabeni Isikhwama kwesicelo okukhulunywa ngaso. Ngabe konke kucacile kuze kube manje? Kulungile-ke masenzeni.
Njengoba kushiwo emigqeni embalwa yokuqala yale mhlahlandlela, kungenzeka faka i-IBAN kuhlelo lokusebenza lwe-IO lweCashback Kokubili lapho kubhaliswa uhlelo okukhulunywa ngalo nangesikhathi esizayo. Ungakwenza kanjani? Ngizokuchazela khona manjalo!
Uma ungakasebenzisi i-State Cashback okwamanje, kufanele wazi ukuthi ungakwazi faka i-IBAN kuhlelo lokusebenza lwe-IO ngesikhathi sokubhalisa. Ukuze wenze lokhu, qala uhlelo lokusebenza okukhulunywa ngalo kudivayisi yakho bese uthinta inketho yesithakazelo sakho phakathi Ngena ngemvume nge-SPID, ukungena ngemvume ngobunikazi bakho bedijithali, futhi Ngena ngemvume nge-CIE, uma ufuna ukungena ngekhadi lakho likamazisi elisebenza ngogesi.
Esikrinini esisha esivelayo, cindezela inkinobho ukwamukela, yamukela imibandela yokusetshenziswa kwensizakalo futhi umemezele ukuthi uyifundile inqubomgomo yobumfihlo, bese wenza i- vula ikhodi Amadijithi angu-6 azosetshenziselwa ukufinyelela esikhathini esizayo, akufake ezinkambeni Khetha ikhodi yokuvula mi Phinda ikhodi yokuvula.
Bese ucindezela inkinobho ukulandela futhi uma idivayisi yakho ikuvumela, landela imiyalo enikezwe esikrinini Ukuqinisekiswa kwe-biometric, ukwenza kusebenze ukufinyelela ngokubona kobuso noma kweminwe (inketho ongayenza ingasebenzi kamuva ngokufinyelela izigaba Iphrofayela mi Izintandokazi Isicelo se-IO).
Manje, khetha inketho Isikhwama etholakala kumenyu engezansi, chofoza entweni Ukubuyiselwa kwemali (kabili zilandelana) bese uthepha inkinobho Yenza kusebenze imbuyiselo. Esikrinini esisha esivelayo, faka amamaki okuhlola adingekayo ukuqedela ukusebenza kwe-Status Cashback bese ucindezela inkinobho Ngiyamemezela.
Ngalesi sikhathi, esibukweni I-IBAN yokugunyazwa, faka i-IBAN ye-akhawunti lapho ufuna ukuthola khona ukubuyiselwa kwemali okuqoqiwe bese ucindezela inkinobho ukulandela. Ngenye indlela, uma uthanda faka i-IBAN kuhlelo lokusebenza lwe-IO ngemuva kokubhaliswa, thinta inketho I-Salta.
Kuzona zozimbili lezi zinqubo, ukuze inqubo yokwenza kusebenze kwe-State Cashback iphumelele, chofoza entweni Faka indlela, khetha okukodwa kokukhethwa kukho okutholakalayo kusuka Ikhadi lesikweletu, ledebhithi noma elikhokhelwa kuqala, Ikhadi le-BancoPosta noma le-PostePay, Ikhadi lokukhokha mi Izicelo zokukhokha zedijithali namathuluzi bese ufaka idatha emikhakheni ehambisanayo. Ekugcineni, thinta izinkinobho ukulandela mi Gcina, ukwenza i-Cashback isebenze ngendlela yokukhokha ekhethiwe.
Uma, kunalokho, ubukade ungeze ikhadi lokukhokha ku-IO, esikrinini Ngabe ufuna ukusebenzisa i-Cashback?, susa isigwedlo sekhadi okukhulunywa ngaso VALIWE un EN bese ucindezela izinkinobho ukulandela, Yenza kusebenze mi ukulandela. Ukwazi inqubo enemininingwane, ngishiya umhlahlandlela wami wokuthi ungabhalisa kanjani ku-Cashback.
Uma uzibuza ungayifaka kanjani i-IBAN kuhlelo lokusebenza lwe-IO esikhathini esizayo ngoba awuyangezanga ngenkathi wenza iCashback isebenze, okumele ukwenze ukufinyelela isigaba Isikhwama wohlelo lokusebenza lwe-IO bese uqhafaza kunketho yokwengeza imininingwane ye-akhawunti lapho ufuna ukuthola khona ukubuyiselwa kwemali okuqoqiwe.
Yize kungekho mkhawulo wesikhathi wokuxhumana ne-IBAN, kuyadingeka ukuyifaka kuhlelo lokusebenza lwe-IO ngaphambi kokuphela kwesikhathi senkomba (30 ngoJuni Los Disemba 31 zonyaka okhona) ngendlela yokuthi kuvunyelwe ukukhokhwa kwemali ebuyisiwe enqwabelene.
Ukuxhumana ne-IBAN, qala uhlelo lokusebenza lwe-IO kudivayisi yakho bese ucindezela inketho yesithakazelo sakho phakathi Ngena ngemvume nge-SPID ed Ngena ngemvume nge-CIE, ukungena ngemvume, ngokulandelana, nge-SPID noma ikhadi likamazisi elisebenza ngogesi. Bese uchofoza ku-elementi Isikhwama futhi, esikrinini esisha esikhonjisiwe, thinta inketho Ukubuyiselwa kwemali maqondana nesikhathi samanje. Bese uthola isigaba I-IBAN yokugunyazwa bese uthinta inkinobho Intela ye-IBAN.
Ngalesi sikhathi, esibukweni I-IBAN yokugunyazwa, faka i-IBAN yakho enkambini ehambisanayo bese ucindezela inkinobho Gcina, ukugcina izinguquko. Iqiniso elilula?
Usho kanjani? Ungakwenza shintsha i-IBAN kuhlelo lokusebenza lwe-IO? Kulokhu, kufanele wazi ukuthi ungashintsha i-IBAN yakho nganoma yisiphi isikhathi inqobo nje uma uzokwenza njalo ekupheleni kwenkomba (30 ngoJuni Los Disemba 31 zonyaka okhona), ngendlela evumela ukukhokhwa kwanoma yikuphi ukubuyiselwa kwemali okuqoqiwe. Lokhu kusho ukuthi akunakwenzeka ukuthi kushintshwe i-IBAN isikhathi sohlelo esesivele siqediwe.
Ukuze uqhubeke, bamba i-smartphone yakho, uqalise uhlelo lokusebenza lwe-IO, bese uqinisekisa nge-SPID noma i-CIE. Bese uchofoza kukho Isikhwama etholakala kumenyu engezansi bese uthepha kuthebhu Ukubuyiselwa kwemali maqondana nesikhathi samanje.
Esikrinini esisha esivele, thinta into Hlela ezihlobene nenketho I-IBAN yokugunyazwa, susa ikhodi ye-akhawunti yasebhange oyixhume ngaphambili bese ufaka entsha I-IBAN emkhakheni ofanele. Bese ucindezela inkinobho Gcina Futhi lokho.
Uma ulandele ngokuningiliziwe imiyalo engikunikeze yona ezigabeni ezedlule kepha uhlangabezana nezinkinga ezikuvimbela ekungezeni i-IBAN yakho nokuthola iCashback eyinqwabelene, ngincoma ukuthi uthumele umbiko ku Ithimba le-IO. Isevisi yosizo isebenza kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu kusuka ngo-08.00: 20.00 kuya ku-08.00: 13.00, kanti ngoMgqibelo, ngeSonto nakuwo wonke amaholide itholakala kusukela ngo-XNUMX: XNUMX kuye ku-XNUMX: XNUMX.
Ukuxhumana nethimba le-IO ukuthola usizo, qala uhlelo lokusebenza okukhulunywa ngalo bese uqinisekisa nge-SPID noma i-CIE. Kwenziwe lokhu, kusithombe-skrini. Imilayezo, cindezela inkinobho ?, ngakwesokudla ngaphezulu, thola isigaba Ngabe udinga usizo? bese uthinta into Bhalela iqembu le-IO.
Esikrinini esisha esivelayo, beka uphawu lokuhlola eceleni kwenketho Yabelana ngekhodi yakho yentela, ukwenza lula ukuxazulula izinkinga, bese ucindezela inkinobho ukulandela. Bese ukhetha izinketho Ukubuyiselwa kwemali mi I-IBAN, faka okwakho ikheli le-imeyili emkhakheni ohambelana nawo bese ubhala umyalezo wakho endle Sibuze okuthile.
Uma ufuna, ungafaka futhi isithombe-skrini sesikrini lapho uthole khona inkinga. Ukuze wenze lokhu, khetha into Faka okunamathiselwe bese ukhetha inketho yesithakazelo sakho.
Yenza ukuqoshwa kwesikrini: Kwenza ukuqoshwa kwesikrini sangempela sedivayisi. Ngemuva kokukhetha inketho okukhulunywa ngayo, iya esikrinini lapho unezinkinga bese uthepha isithonjana ikhamera yevidiyo, ukuqala ukurekhoda. Bese ukhombisa inqubo ekunika izinkinga futhi, lapho ubona kufanelekile, cindezela isithonjana se cuadrado ukumisa ukurekhoda bese unamathisela ividiyo kumyalezo wakho.
Thatha isithombe sesikrini: inketho efana kakhulu neyedlule. Kulokhu, iya kusikrini "senkinga" bese uthinta isithonjana ikhamera, ukuthatha isithombe-skrini sesikrini okukhulunywa ngaso.
Khetha ifayela kusuka kugalari: Le nketho ikuvumela ukuthi unamathisele isithombe-skrini osithathile ekuqaleni, usikhetha kugalari yefoni yakho.
Ngalesi sikhathi, konke okufanele ukwenze ukucindezela isithonjana seindiza yamaphephaphezulu ngakwesokudla ukuletha umbiko wakho. Lapho nje ithimba le-IO liphendula umlayezo wakho, ungabona impendulo ngokungena esigabeni Imilayezo kwesicelo okukhulunywa ngaso.